Daawo Sawirrada: Markab sahay gar gaar sida oo Wasaaradda arrimaha gudaha la wareegtay “SAWIRRO” – Gedo Times
Daawo Sawirrada: Markab sahay gar gaar sida oo Wasaaradda arrimaha gudaha la wareegtay “SAWIRRO”
29th May 2016 admin Arimaha Bulshada, Wararka Maanta 0
Markabkan oo siday 11-kun oo tan oo cunto ah ayaa ka yimid dowlada iyo shacabka Turkiga, waxaana loogu talo galay dadka Soomaaliyeed ee qaarkood ay baaruhu saameeyeen.
Wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa gargaarkan kala wareegtay mas’uuliyiin ka socday dowladda Turkiga iyo hey’ada bisha case e dalka turkiga oo uu horkacayey safiirka dowlada Turkiga ee Soomaaliya.
Danjire Olgan Baker safiirka dowlada Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo gudaha dekeda Warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talo galeen shacabka Soomaaliyeed, lana gaarsiinayo dadka mudan.
“Waxaan rabnaa inaad nala aragtaan gargaarkan oo ka kooban 11-kun oo tan oo cunto, waxa uu gargaarkan ka ymid shacabka dalka Turkiga, waxey muujineysaa saaxiibtnimada shacabka Turkiga iyo Soomaaliya”ayuu yiri Mr Olgan Baker.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya mudane C/rashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in dowladu si siman gargaarkan ay ugu qeybin doonto dadka Soomaaliyeed, isagoo u mahad celiyey dowlada iyo shacabka dalka Turkiga.
“Waan ku faraxsanahay in dowladda Turkiga shacabka Soomaaliyeed ay soo gaarsiiso gargaarkan, dowlada Soomaaliya maalmaha dhow ayey si siman ugu qeybin doontaa shacabka Soomaaliyeed ee gargaarka u baahan”ayuu yiri Wasiiru dowlaha.
SAWIRRO: Wasiirka Maaliyadda oo daah furay mashruuc shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed